Kate Middleton gosipụtara ọha mmadụ na ihe osise ọhụrụ nke Princess Charlotte
Ndị Fans a maara nke ọma na ndị òtù ezinụlọ Britain nwere ike ịmara na Kate Middleton nwere ezigbo ntụrụndụ. Otu n'ime ha bụ nkà nke foto, nke ụyọkọ nke ọtụtụ afọ gara aga. Site na oge ahụ, Kate na-eme ka ndị na-agbanyere ya na-ese foto na ndị mara mma. Ya mere, dịka ọmụmaatụ, ụnyaahụ Middleton bipụtara foto nke nwa ya nwaanyị - obere nwa-nwoke Charlotte.
Ụbọchị mbụ nke Charlotte n'ụlọ akwụkwọ
N'oge na-adịbeghị anya, ndị nta akụkọ ahụ dere na Duke na Duchess nke Cambridge kpebiri inye nwa ha nwanyị Charlotte n'ụlọ akwụkwọ ụmụaka pụrụ iche na King Tony kpọrọ Ụlọ Akwụkwọ Nursery. A maara na nwa eze ahụ agala ihe ọmụmụ na nhọpụta nke otu izu na, na-ekpe ikpe site na foto Middleton mere n'ụbọchị mbụ nke njem Charlotte n'ụlọ akwụkwọ, nwa agbọghọ ahụ nwere obi ụtọ. Kate weere foto nke nwa ya nwanyị mgbe ọ hapụrụ ụlọ akwụkwọ ma nọrọ ntakịrị ntakịrị. Na nwa agbọghọ ahụ, dịka a na-atụ anya ya, ị ga-ahụ uwe na-acha odo odo, na ụda akpụkpọ ụkwụ ya na n'ezie azu paaki.
Cheta, ihe dị ka ọnwa gara aga, a bịara mara na Kate na William kpebiri inye Charlotte n'ụlọ akwụkwọ pụrụ iche. Dị ka onye nnọchianya nke Kensington Palace kwuru, Princess Charlotte ga-aga otu ìgwè pụrụ iche, bụ nke e debara aha ụmụaka site na 2 ruo 3 afọ. Klas na Willcocks Nursery na-ekewa n'ọtụtụ nkebi. Akwụkwọ ụtụtụ na-enyere ụmụaka aka ịghọta ịgụ, ide na ịgụta ọnụ. A na-eme klas na nkewa nke ụlọ akwụkwọ ahụ site na elekere 9 nke ụtụtụ n'elekere 12. Ọzọkwa, Charlotte na-aga na Lunch Club, ebe a na-eme klas na 12 ruo 15. Ezi, ọ bụghị kwa ụbọchị, mana na Monday, Friday na Thursdays. N'akụkụ a nke ụlọ akwụkwọ, ụmụ akwụkwọ na-amata nkà, nkuzi ahụike na nkwurịta okwu. Tụkwasị na nke ahụ, enwerekwa Ụlọ Akwụkwọ Ezumike, nkewa dị iche iche na akụkọ ihe mere eme, eserese, egwu na French.
Princess Charlotte na Kate Middleton
Ihe kachasị mma na foto nke agbamakwụkwọ nke Prince Harry na Megan Markle!
25 ndị ​​eze ga-eme n'ọdịnihu nke Great Britain
Kensington Palace bipụtara foto ọhụrụ nke Prince Louis na Princess Charlotte
Middleton na-ejikarị foto nke ụmụ ya
Cheta, Kate Middleton edepụtawo ihe ngosi nke Princess Charlotte na Prince George. Ọ bụ ya ghọrọ onye na-ekpuchi ụmụ ya mgbe ha na-eme ememe ụbọchị ọmụmụ ha. N'ajụjụ ọnụ ya, Duchess nke Cambridge ekwuwo okwu a ugboro ugboro:
"Enwere m obi ụtọ na ọ bụ m ga - ejide oge kamera nke ụmụ m. Maka m, dị ka ndị niile nọ n'ezinụlọ anyị, nke a dị ezigbo mkpa. M na-agbalị ime ka ụmụ m lee anya dị ka o kwere mee na foto, n'ihi na ihe osise ndị a na-ekwu n'ezie, ọ bụghị nke e mere ndụ. "
Foto nke Charlotte maka afọ abụọ
Mgbe ihe osise ọhụrụ nke Princess Charlotte pụtara n'akwụkwọ akụkọ ahụ, ezigbo enyi nke Duke na Duchess nke Cambridge kwuru banyere foto ndị ọhụrụ:
"Kate na William nwetara akwụkwọ ozi dị ukwuu site na ndị agbụrụ ha, bụ ebe ha na-enwe mmasị na George na Charlotte. Duke na Duchess nwere nnọọ olileanya na foto ọhụrụ ndị e bipụtara ụnyaahụ ga-amasị ndị mmadụ, dị ka ndị nne na nna nke nwa-nwoke Princess Charlotte. "
Prince George na nwa-nwoke-nwanyi Charlotte
Nwa obere nwanne Margot Robbie - mara mma
Biography nke Enrique Iglesias
A hụrụ Courtney Kardashian na họtel ahụ na onye ọhụụ ọhụrụ na-eto eto
Irina Sheik na Bradley Cooper - akụkọ kachasị ọhụrụ
Onye dike nke Ben Stiller na ụlọ ọrụ Kiehl na-akpọ ndị na-azụ ahịa na-eto eto nke ọma
A kpọrọ onye ọhụụ Gwyneth Paltrow ka ọ bụrụ ụbọchị ọmụmụ ya
Ntughari Witherspoon na akwa bat na-ewe iwe ya
Cristiano Ronaldo - nwoke nwere mmasị nwoke?
Selena Gomez kwadoro aka aka na Onwe m
Kate Middleton na uwe elu ya na njem nleta na South Wales
Ryan Gosling na Eva Mendes
Prince Harry na Megan Markle mesịrị kụọ oghere nke paparazzi
N'okwu ịgba alụkwaghịm Kate Moss na Jamie Hins tinyere isi
Chloe Kardashian mụrụ nwa nwanyị
Kedu ka esi eto ochie ụlọ?
Uche maka ụmụ agbọghọ nọ n'afọ iri na ụma
Ụbọchị Ọhụụ Ụwa
Ịhịa aka n'ahụ mmiri
Horsetail maka ụkọ ọnwụ
Uwe Uwe Uwe Umu Umu Umu Umu Umu
Ọrịa nke ntị na nwamba
Pancreatitis na nkịta - mgbaàmà
Achịcha na cheese
Afọ Sangria dị afọ 15
Pergola maka mkpụrụ vaịn
Joshua Jackson: n'ime afọ iri gara aga, ụwa agbanweela ọtụtụ
Akwa maka ụmụ ọhụrụ
Mmekọahụ maturation na nwamba
Cerucal maka ụmụaka
Mmiri egwuregwu maka mmiri
Esi ewepu nasolabial?
Kedu ọnụọgụ abụọ ịhọrọ - ndụmọdụ bara uru tupu ịzụta
Egwu dị mma
Kedu otu esi eme ka a na-eme ka a na-eme ka a ghara ịkụcha kịtịre na oven?
Kedu ka ị ga-esi ghara imerụ mmadụ ahụ n'oge ememme ahụ?